Ọkachamara Semalt: Ụdị Nlekọta Na Nyocha Na-ahụ Anya
Mgbe ị na-atụgharị uche n'akụkọ ihe mere eme mbụ nke nlekota anya na ihe ngosi ndị e kere eke,ọ aghọọla ụlọ ọrụ ọtụtụ ndị na-emetụta ọtụtụubi. Iji ghọtakwuo ihe nlekota anya, ihe niile gbasara ya aghaghị ibu ụzọakọwapụtara
Julia Vashneva, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa Mkpụrụ akwa DigitalỌrụ, na-enye ihe ọmụma banyere ọnọdụ kachasị ọhụrụ na teknụzụ na-ekiri anya na-eru na nka na ahụmịhe zuru okenke nkwado na CoolTool , ụlọ ọrụ nyocha ahịa.
Nyocha ihu anya nwere ike ịkọwa dịka nchịkọta nke data ocular. A chịkọtara data ahụsite na ngwaọrụ ndị na-abụghị ndị na-emetụtaghị ya dịka ihe nlekota anya nke anya ma ọ bụ nke isi. Nangwa nke na-abụghị nke na-eji igwefoto eme ihe na igwefoto dị ka ebe nchekwa ọkụ. Naa na-eme ka isi iyi dị na anya dị ka ihe igwefoto na-edekọ ederedenjirimara (dịka ọmụmaatụ, nkuzi nwa akwụkwọ, oge ntụgharị, mmegharị ntụgharị). NchịkọtaA na-eji data nyochaa nlezianya anya nyocha data na nyocha ndị a chọpụtara.
A na-eji usoro nlekota anya anya ugbu a na ahịa ndị ahịa na nkwakọ ngwaahịanchọpụta, agụmakwụkwọ, ịgwọ ọrịa na akparamàgwà omume, yana ụmụ mmadụnchọpụta ihe na njirimara nke nyocha na ngwa ngwa. Dị ka ndị nchọpụtachọpụta ụzọ ọhụụ nke ngwa maka nlekota anya, ubi ahụ gbasaa n'ụzọ dị ịrịba ama.Ọbụna ndị agha ejiriwo ekpuchi ihu igwe maka ndị na-anya ụgbọ ọgụ na hangosipụta nke isi ihe dị elu (HUDs) maka uru bara uru.
Mgbe ị na-atụle nlekota anya, ọ dị mkpa ịghọta ihe anọ dịụdị anya mmegharị nke bụ ihe ndabere nke anya nsuso teknụzụ ha gụnyere:
Saccades..A na-ewere ha dị ka mmeghari anya nke ngwa ngwa nke na-agbanwe ngwa ngwa naisi ihe ntinye. Ha nwere ike ịbụ obere mmegharị n'oge ọgụgụ ma ọ bụ nnukwu mmegharịmgbe ị na-elegharị anya gburugburu ụlọ. N'ozuzu ha, ha na-eme mgbanwe na ọdịdị, maenwere ike inye onwe gị n'afọ ofufo. Ihe mmegharị anya na-emekarị nke ọmaỤdị ụra nke mmadụ.
Nchọgharị na-elegide anya. Ọtụtụ dị nwayọọ karịa ụdị ndị ọzọ anya, na SmoothNchụso na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke afọ ofufo (obere mpaghara nkeonye na-acha azụ azụ ebe ọhụụ kasị elu). Onye ahụ nwere afọ ofufoike iji soro ma ọ bụ ileghara ihe ndị ahụ anya. E nwere ndị ahụ a zụrụ azụbụ ndị nwere ike ịme njem na-adịghị mma ma ọ bụrụ na enweghi ihe mgbochi (ihe mgbaru ọsọ).
Nkwagharị mgbochi. N'adịghị ka ụdị mmegharị anya ndị ọzọ, ebe anya abụọ na-agaotu ntụziaka ahụ, mmegharị ntinye anya bụ ihe arụ. Ụzọ nke ịhụ onye ọ bụlaanya nwere ike ịhụ ihe nke dị nso ma ọ bụ n'ebe dị anya. The pupillarynchikota nke a na - eme ka oghere nke nghọta ghọtawanye ihe oyiyi nke fovea (retina).
Vestibulo-ocular Movements. Na-akwụ ụgwọ maka isi isi, vestibulo-ocularmmegharị anya na-enyere aka idozi ihe ngosi nke ihe mgbochi anya. The retinalelu na-eme ka onyinyo ahụ "kwụsị" site na ịchọpụta mgbanwe na-agbanwe agbanwe (isi iyi)si otú ahụ na-agbanwe site na mmezi anya mmezi. Ndozi ịkwụ ụgwọ bụngwa ngwa, n'ihi mmeghari isi na nzaghachi uche
Ònye Na-enye Ndepụta Anya
Kwa ụbọchị, a na-eji ngwa nlekota anya anyaụzọ ohuru. Mgbe mmadụ na-eche banyere otu onye na-eji anya eme kwa ụbọchị, ọ bụghị ihe ijuanyaozi ahụ ọ na-achịkọta bara uru maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla. Otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ bụ nchọpụta ahịa.A na-eji ozi nchịkọta nke nchịkọta nyocha nke anya na-eji na nkwakọ ngwaahịa yana mgbasa ozi.
Egwuregwu ndị ọkachamara na-eji teknụzụ na-ekpochapụ anya na ihu igwe ka mmaarụ ọrụ nke onye na-eme egwuregwu site na ijikọta usoro iheomume, usoro mmụta na omumedata iji nye ngwá ọrụ mmesapụ aka iji melite onye ọ bụla. Ndị ọkachamara na ndị na-adịghị ahụ maka ahụ ike na-eji nkà na ụzụ anyaha na-atụle nkà ọgụgụ isi, dyslexia, arụ ọrụ igwe, yana ederedena nhazi ihe oyiyi. Site n'iji ihuenyo ese onyinyo na ihugharindị na-eme nchọpụta achọtawo ụzọ ọhụrụ iji tụọ ma chọpụta naarụ ọrụ mgbochi na mgbatị na-eme ihe iji dozie nsogbu ndị mmadụ.
Ebe ohuru nke anya nlekota anya bu nyocha anya. Ndị nchọpụta nọ na-emepe emepengwá ọrụ ndị nwere ike imecha gbanwee mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na kọmputa. Nanchọpụta na-elekwasị anya na iji anya iji chịkwaa cursor kọmputa..Kaman'iji òké, mkpịsị ọṅụ ma ọ bụ mpempe akwụkwọ, onye ọrụ ga-ejikwa arụ ọrụ kọmputasite na anya anya na ikuku.
Kedu kpọmkwem otú e si akọwa ọrụ nyocha anya maka onye nkịtị nkịtịokwu na-adịghị mfe. Nlekọta anya site na mmalite ya ka ejiri mee ihema nyochaa anya mmadu. E nwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi jiri nlezianya dị otú ahụ tụọ anya, ma ihe kachasịsịsị bụ usoro nke na-adịghị emetụta ya.
Nyocha na-adịghị emetụ n'ahụ anya
Nzube na-adịghị emetụtakarị anya nlekota anya nyocha bụ ụlọ ọrụ ụmụ akwụkwọechiche (PCCR). Ebumnuche a na-eji ebe nchekwa dịpụrụ adịpụ iji kpuchie yaanya, nke ụlọ ọrụ na-eme ka echiche na-enye ohere ka ịdebe igwefotoweghaara data onyonyo. Ihe oyiyi a weghaara na ngwaọrụ ndekọ (igwefoto) na-egosipụtaechiche dị iche iche n'etiti ntụgharị uche ụmụ akwụkwọ na cornea. Ozugbo oziejidere okpokoro ngwongwo nke oghere angled iji mepụta geometricalihe ngosi ndị na-egosipụta ihe ndabere nke nduzi anya.
Dabere na nyocha anya anya nke ngwanrọ na-eji, nhazi ntule anyana-enye ohere maka ọdịdị dị iche iche oyiyi-algorithms yana 3D ụdị anyana mkparịta ụka na isi na-ele anya. N'okwu dị mfe, usoro ahụ na-edekọmmeghari anya nke anya anya, na-enyocha isi ihe omumu anya, na-eleba anya na isinke na-ele anya na-ele anya, na -emepụta mkpokọta data nke mgbe nyochara na-enyeonye ọrụ njedebe data na nkọwa ya. Nsonaazụ nwere ike ịleleihe ọ bụla na-etolite anya onye ọrụ, iji dozie ihe a kapịrị ọnụ. Ijikọwaa n'ihu, ihe atụ nke usoro a bụ:
Onye na-eme nchọpụta anya na-achọ ịmatapụta ihe oyiyi ụfọdụ na kọmputa(dịka, ngwaahịa na-emetụta). E nwere ihe oyiyi yiri nke a na aihuenyo kọmputa na ọdịiche dịgasị iche (agba, nha, wdg) Onye nchọpụta ahụchọrọ ịchọpụta nke nke ihe oyiyi onye ọrụ kọmputa na-elekwasị anya (nkeatụgharị ga-enwe ike ịchọpụta ihe oyiyi ngwaahịa a bụ ihe na-atọ ụtọonye ọrụ). Usoro nlekota anya anya na-agụnye usoro ndekọ,ihe ngosi na usoro nke algọridim dị mgbagwoju anya. Na mbido, onye oru ngo ahụ na-emepụtaihe oyiyi nke infrared nke anya. Ọzọ, ihe ndekọ igwefoto na-eweotutu ichota elu nke obosara nke onye oji (dika, nke nkeihe oyiyi dị na ihuenyo njirimara na-elekwasị anya).
Ngwunye algorithms nhazi (kpọmkwem, anya nlekota anya ngwa ngwana nchikota oyiyi) chọpụta nkọwa zuru ezu nke anya onye ọrụ na reflectiveihe nakawa. N'ikpeazụ, dabere na nkọwa nchịkọta akụkọ gbasara ngwanrọ ahụna-atụgharị anya na ịchọta anya ma na-ele ihe anya. A kọwaziri data abanyere onye n'ime ihe oyiyi na kọmputa na onye nyocha na-elekwasị anya na haelebara anya (ya mere onye nyocha ahụ nwere ike ịchọta nke nke ngwaahịa aotu njirimara njedebe njedebe elekwasị anya).
Dika ogwe anya nke uzuzu anya na-agbasawanye na ebe di iche iche, ajuru abiabanyere uru ya yana nchegbu maka inweta ezi data. Na ndị dị otú ahụechegbu onwe ya ma ịma jijiji na-emetụta nsonaazụ anya anya..Dị ka na-eme ka mmadụ na-egbuke egbukeanya bụ ihe arụ ọrụ, ọ naghị enwe ike ịchịkwa ya. Na ekelena nchikota anya, ichikota anya na-egbochie nkuchi anya na cornea mgbe nkuchianyamechie. Dika ihe nlebara anya nke nlebara anya bu ihe di mkpa na nchikota onyonyo anya,n'oge nsonaazụ ikpeazụ ọ na-ewepụta ihe data data efu efuma ọ bụ ntuziaka mmịpụta ma ọ bụ akpaaka mmịpụta site anya nsuso ngwanrọ.Ọ bụ ezie na nbudata data agaghị abụ 100% ọ dị nso iji nweta nkọwa ziri ezi.
Ajuju ọzọ na-ebute ma ma ọ bụ isi isi na-emetụta nsụgharị anyansonaazụ? Ọkpụkpụ isi n'oge oge nlekota anya bụ otu ihe kpatara yanwere ike ịpụta nsonaazụ dị ka ọ nwere ike inwe mmetụta na-emetụ n'ahụ banyere ịdị mma nke anyadata. Na-edozi nsogbu nke ijegharị isi, ọtụtụ sensọ anya naigwe foto nchịkọta ihe na-adị n'ime njirimara onye ọrụọhụụ iji mepụta ụdị "nhazi data streo" nke na-abawanyeọhụụ nke ọhụụ. Ọzọkwa, ọ dị ka ikuku, anyangwanrọ ngwanrọ ga-emepụta atụmatụ nke ga-echebara echicheeme ka ọkpụkpụ na-eme mgbanwe ma gbanwee usoro nkọwa ikpeazụ.Ihe enweghi ike gbanwee na nsonaazụ ikpeazụ bụ ma ọ bụrụ na onye nyochaa anyana-agbanye isi ha n'akụkụ, na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụbụ nke dịgasị iche iche nke ihe ntanetị anya na ese foto.
Mgbe ị na-atụle nkà na ụzụ anya anya otu ajụjụ nke yiri ka ọ dịebili bụ izi ezi na nkenke nke ngwa nlekota anya anya (ngwa anyaihe mmetụta, igwefoto, wdg) yana nkọwa nkọwa data (ngwanrọ).Ndị a na-echebara e agwa site dị iche iche anya nsuso ụlọ ọrụndị mepụtara ụkpụrụ ọmịiko iji hụ na ọ kachasị mmakwere omume. Ụkpụrụ ziri ezi nke Monocular na-elele anya ọ bụla n'imeiji chọpụta ịrụ ọrụ ziri ezi nke anya mmadụ. Dị ka emegideiji nweta ule na-ezighị ezi na-eme ka ọ bụrụ na ị na-anwale ma anya abụọ (mgbe mgbeweere ya dị ka ihe dị na ya).
Ọdịnihu nke Ndepụta Anya
Nkọwa Ihe ziri ezi na-atụle ezigbo ọnọdụ nleredị ka ntọala iji tụọ ihe ọ bụla ziri ezi. Eziokwu na okeule anya na-anwale akụkụ anya nke na-emetụta nke bụ ihe bụ isi nkeanya anya. Ịgba ngọngọ nke ọma bụ ule nke na-eji anọnjirimara nke ìhè gụnyere ntụgharị ihu na azụ(nnyonye anya). Ikwasi elu nke isi na-eburu n'ucheisi mmegharị n'oge usoro nlekota anya. Onye ọ bụla n'ime ndị aa na-eduzi usoro ihe nyocha na njikọta ngwá ọrụiji nọgide na-enwe nsonaazụ ọchụchọ kachasị mma.
A ka nwere ndị nkatọ ndị nwere nchegbu na nlekota anya dị nnọọnkà na ụzụ ọhụrụ. Ndị nkatọ ebuliwo egwu na nkà na ụzụ nwere ikea ga-eji ya eme ihe na / ma ọ bụ ihe ndị na-esi na-anwale anwapụtahie. Dị ka nkà na ụzụaghọwanye ọkaibe na ihe ndị a kọwakwara, nkendị nkatọ yiri ka hà dị ole na ole ma dị n'etiti. Igwe ihe omimi anyana-achọpụta ụbụrụ ụbụrụ na nkwarụ, na agụmakwụkwọ maka ndị nwereadịghị ike ịgụ ihe na n'ọtụtụ mpaghara ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche.
Ọdịnihu nke nyocha ihu igwe na-egosi na ọ nọworị ebe a..Cellularekwentị anya na teknụzụ amalitelarị. Ụlọọrụ Samsungemeela otu akara igwe ekwentị nke ga-eme ka vidiyo na-eche ihu n'ihumgbe onye ọrụ ahụ lepụrụ anya. Samsung na ụlọ ọrụ ekwentị mkpanaaka ndị ọzọiwebata ihe omuma nke iris nke izizi nke ga-emeghe n'eluonye ọrụ na-eleba anya na ihuenyo ekwentị.
Ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ na-emepe anyausoro nlekọta nlekota oru nke nwere ike ịchọpụta mgbe onye ọkwọ ụgbọala na-arahụ ụrasi otú ahụ na-ebelata ihe mberede. N'ihi ya, a pụrụ iji anya na-emepụta ụgbọala ndị n'ọdịnihunyochaa usoro nyocha nke nwere ike ime mgbanwe n'ime uzo uzo site na ileleonye na-akwọ ụgbọala na gburugburu ya (pavement mmiri, mmiri snow, na ihe ndị ọzọ).E gosipụtawo nkà na ụzụ nyocha ihu igwe na ụwa nke ịgba chaa chaa n'eziokwu.Usoro nke VR jiri nka a na-emegharị ihe site na mmeghari nke anya.N'ime ụlọ ọrụ ahụike, nsogbu ndị e mepụtara maka nlekota anya ga-ekwe kaachọpụta ihe mbụ nke ọrịa strok ma ọ bụ jidere.
E nwere ọtụtụ ihe ịma aka ndị na-adabere na ụzọ nke teknụzụ anyaka ọ na-adanye n'ime ọdịdị nke ndụ. Ihe nyocha ihu anyangwanrọ ga-adị iche site na anya dị mfemmegharị (ndọpụ uche na ebumnuche). A ga-edozi ihe ndị ọzọgụnyere ọhụụ ọhụụ, ọnọdụ anya na ihe ndọpụ uche. Dị anyanlekota oru nlekota oru na-eme ihe ntanyepu na ntanetianya, enweghi ihe omimi zuru ezu banyere ihe nbibi nke ugha di iche iche ma obu nke ozo.
Dị ka ọmụmaatụ, anyị na Semalt Digital Services na-arụkọ ọrụ na ya CoolTool ụlọ ọrụ nyocha ahịa, nke na-enye anya zuru ezunsụgharị teknụzụ na usoro ndị ọzọ na-emechi omume omumemaka nchọpụta ahịa ahịa dị mgbagwoju anya. N'ezie, ụlọ ọrụ a nwereọganihu magburu onwe ya na ọchichọ dị elu n'ihi mmasịnke ndị na-ege ntị na nkà na ụzụ. N'ezie, anya nlekota anya na-enye gị ohereiji lelee ụfọdụ mmeghachi omume na akụkụ nke ahịa gị,nke dị iche na nyocha nke ndị ahịa ọdịnala. Ọ na-akpata annukwu ewu ewu nke anya nlekota anya na ahia ahiana omume a na-eto eto.
N'ikpeazụ, anya nyocha ihu igwedị ebe a iji nọrọ. A na-etinye teknụzụ n'ime ndụ anyị kwa ụbọchị ka ya nabata yayiri ka ọ bụ ebe niile. Ozugbo mmepe na mmelite na-ewere ọnọdụ, nlekota anyaga-anọgide na-ebuli elu nke iji teknụzụ maka akpaaka nke ngwa ngwaọrụ nanchọpụta nke ahụike na / ma ọ bụ uche uche (na nke ahụ bụ mmalite) Theọdịnihu nke anya nsụgharị teknụzụ abụghị nanị na onye ọ bụla na-eme nchọpụta si n'echiche,ngwa ngwa ya na ndụ anyị enweghị njedebe Source .